Cervical Spondylosis – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
? ဟိုးရှေးရှေးတုနျးကတော့ ကိုယျ့ကို လညျပငျးဖကျပေါငျးခဲ့ကွသူတှကေ ခဈြခငျရတဲ့ သူငယျခငျြးတှပေေါ့။ အသကျကလေးရလာလေ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သူငယျခငျြးတှေ တဈယောကျပွီးတဈယောကျ ဝေးသှားကွတယျ။ ရောဂါတှကေတော့ တဈခုပွီးတဈခု ရောကျလာပွီး မိတျဖှဲ့ကွတော့တာပဲ။ မခငျခငျြလို့မရ။ မုနျးလညျး ရှောငျလို့မရ။
ကွီးမှ လညျပငျးဖကျ လာပေါငျးခငျြတဲ့ စိတျညဈစရာရောဂါ။
? လညျပငျးကြီးပေါငျး ဘာလို့ဖွဈ?
တခြို့တှမှောတော့ ဘာလက်ခဏာမှ မပွဘဲ ရှိနတေတျတယျ။
ဆေးလိပျသောကျရငျ ပိုဖွဈနိုငျသလို လညျပငျး ကုပျပိုးနဲ့ ဇကျကွောတှမှော ထိခိုကျဒဏျရာရဖူးရငျ ပိုဖွဈနိုငျပါတယျ။
လညျပငျးကနေ ခါးအောကျမွီးညှောငျ့ရိုးနားအထိရှိတဲ့ ကြောရိုးဆဈတှတေဈလြှောကျမှာ ဖွဈတတျပါတယျ။ လညျပငျးတဈဝိုကျက Cervical spine bones တှမှော ဖွဈတော့ Cervical spondylosis လို့ချေါတာပေါ့။
ကြောရိုးဆဈတဈခုနဲ့ တဈခုအကွားမှာ ကူရှငျလို ဝါရှာလို ရှော့ဘားလို ခံထားတဲ့ Vertebral discs လေးတှဟော အသကျကွီးလာလေ ရဓောတျခနျးခွောကျမှုကွောငျ့ ယိုယှငျးလာလဖွေဈလာကွတယျ။ အရိုးနှဈခုကွားထဲက ကွားခံ ကူရှငျလေး ပါးလြားပကျြစီးလာတော့ အရိုးခငျြးပှတျတိုကျမှုအား ပိုမြားရငျး အရိုးတှမှောပါ တဖွညျးဖွညျး ပုံစံပွောငျးလာတတျသလို spur လို့ချေါတဲ့ကြီးပေါငျး အတကျကလေးတှေ ဖွဈလာတတျတယျ။
လညျပငျးမှာဖွဈတော့ လညျပငျးကြီးပေါငျးချေါပွီး ခါးဆဈရိုးတှမှောဖွဈရငျတော့ ခါးကြီးပေါငျးလို့ ချေါကွပါတယျ။
အရိုးအဆဈတှကေို ဘယျညာ အထကျအောကျ ခြောခြောမှမှေ့လှေု့ပျရှားနိုငျဖို့မရှိမဖွဈလိုတဲ့ ကွားခံ disc ကလေးတှေ ပကျြစီးလာပွီဆိုရငျ လညျပငျးရဲ့ လှုပျရှားမှုတှမှော တောငျ့တငျးနာကငျြလာမှာကတော့ အသအေခြာပဲပေါ့။
ခေါငျးကိုကျတာ ဇကျကွောတကျတာတှဖွေဈမယျ။ ဟိုဘကျဒီဘကျ လှညျ့မရလို့ “ဟာ..အဲ့လိုနျော..ခတြေယျနျော မချေါဘူးနျော ဒီဘကျတောငျ လှညျ့မကွညျ့ဘူးနျော” စှပျစှဲခံရတတျတယျ။
ဒီထကျပိုဆိုးလာရငျတော့ အရိုးအတကျကလေးတှကေ ကြောရိုးတဝိုကျက အာရုံကွောလေးတှကေို သှားဖိမိ ထိမိရငျ ခွလေကျ ထုံကငျြလာတာမြိုးတှဖွေဈတတျတယျ။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကြောရိုးတလြှောကျမှာ ဦးဏှောကျကနေ ဆငျးသကျလာတဲ့ spinal cord အာရုံကွောမကွီးကို ဖိမိရငျတော့ လမျးလြှောကျရခကျလာတာ ခြိနဲ့လာတာ ဆီးဝမျး မထိနျးနိုငျတာတှအေထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒီလက်ခဏာတှေ တဈခုခုဖွဈလာရငျတော့ ဆရာဝနျ မွနျမွနျပွဖို့ လိုပါတယျ။
လညျပငျးကြီးပေါငျးလို့ သခြောဖို့ လညျပငျးရိုးကို ဓာတျမှနျရိုကျကွညျ့ပွီးသိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသကျခွောကျဆယျကြျောလာရငျ လူတဈရာမှာ ရှဈဆယျ့ငါးယောကျလောကျမှာ လညျပငျးကြီးပေါငျးလို့ ပွောလို့ရတဲ့ Osteoarthritis(OA) Changes တှေ ဓာတျမှနျမှာတှနေို့ငျပါတယျ။ ဒီတော့ ဖွဈလာတဲ့ ဝဒေနာတှဟော လညျပငျးကြီးပေါငျးကွောငျ့ မဟုတျဘဲ တခွားရောဂါတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈနနေိုငျတာ သတိထားရပါမယျ။
လညျပငျးကြီးပေါငျးကွောငျ့ မူးနိုငျခနြေညျးပါတယျ။ နားအတှငျးပွဿနာတဈခုကွောငျ့ ခေါငျးလှညျ့တိုငျးမူးတဲ့ Benign Positional Vertigo ရောဂါဟာ လူကွီးတှမှော အဖွဈမြားပွီး လညျပငျးကြီးပေါငျးလို့ မကွာခဏ မှားသမုတျတတျကွပါတယျ။
Spinal cord အာရုံကွောမကွီးနဲ့ spinal nerves အာရုံကွောလေးတှေ၊ spinal cord သှားရာလမျးတဈလြှောကျ အခွအေနတှေကေိုသိနိုငျဖို့ သံလိုကျဓာတျမှနျ MRI နဲ့ CT scan တှေ ဆကျလုပျရတတျပါတယျ။
အာရုံကွောမကွီးကို ထိခိုကျတဲ့ (ဒါမှမဟုတျ) ထိခိုကျနိုငျခွရှေိတဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာတော့ ခှဲစိတျရတတျပါတယျ။
အဲ့လောကျမဆိုးတဲ့ ဇကျကွောတကျတာ တောငျ့တငျး နာကငျြ ကိုကျခဲတာ ထုံတာကငျြတာတှအေတှကျကတော့ လိမျးဆေး၊သောကျဆေးတှေ၊ Physiothreapy လကေ့ငျြ့ခနျးတှနေဲ့ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ သကျသာအောငျ လုပျလို့ရပါလိမျ့မယျ။
သုတသေနမရှိတဲ့ အမညျခံသကျသကျ ကြီးပေါငျးပြောကျဆေးဆိုတာတှေ ဆေးမွီးတိုတှတေော့ ရှောငျရပါမယျ။
ဘယျတော့မှ ပြောကျမသှားဘဲ ကြောရိုးတလြှောကျအဆဈတှမှော အမွဲဆကျရှိနမေဲ့ OA Changes တှနေဲ့ ‘ကြီးပေါငျး’ ဆိုတဲ့ကောငျတှကေတော့ “ဇရာ” ဆိုတဲ့ နောကျထပျ ခပျဆိုးဆိုး ကွီးပေါငျးသူငယျခငျြးတဈယောကျနဲ့အတူတူ ကိုယျ့ရဲ့ အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျး ခရီးစဉျတဈလြှောကျ လညျပငျးကိုဖကျလိုကျ ခါးကိုဖကျလိုကျနဲ့ တတှဲတှဲ လိုကျလာနဦေးမှာကိုး။
? ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကတော့ ကိုယ့်ကို လည်ပင်းဖက်ပေါင်းခဲ့ကြသူတွေက ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ အသက်ကလေးရလာလေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဝေးသွားကြတယ်။ ရောဂါတွေကတော့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောက်လာပြီး မိတ်ဖွဲ့ကြတော့တာပဲ။ မခင်ချင်လို့မရ။ မုန်းလည်း ရှောင်လို့မရ။
ကြီးမှ လည်ပင်းဖက် လာပေါင်းချင်တဲ့ စိတ်ညစ်စရာရောဂါ။
? လည်ပင်းကျီးပေါင်း ဘာလို့ဖြစ်?
တချို့တွေမှာတော့ ဘာလက္ခဏာမှ မပြဘဲ ရှိနေတတ်တယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ရင် ပိုဖြစ်နိုင်သလို လည်ပင်း ကုပ်ပိုးနဲ့ ဇက်ကြောတွေမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖူးရင် ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လည်ပင်းကနေ ခါးအောက်မြီးညှောင့်ရိုးနားအထိရှိတဲ့ ကျောရိုးဆစ်တွေတစ်လျှောက်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်က Cervical spine bones တွေမှာ ဖြစ်တော့ Cervical spondylosis လို့ခေါ်တာပေါ့။
ကျောရိုးဆစ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကြားမှာ ကူရှင်လို ဝါရှာလို ရှော့ဘားလို ခံထားတဲ့ Vertebral discs လေးတွေဟာ အသက်ကြီးလာလေ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုကြောင့် ယိုယွင်းလာလေဖြစ်လာကြတယ်။ အရိုးနှစ်ခုကြားထဲက ကြားခံ ကူရှင်လေး ပါးလျားပျက်စီးလာတော့ အရိုးချင်းပွတ်တိုက်မှုအား ပိုများရင်း အရိုးတွေမှာပါ တဖြည်းဖြည်း ပုံစံပြောင်းလာတတ်သလို spur လို့ခေါ်တဲ့ကျီးပေါင်း အတက်ကလေးတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။
လည်ပင်းမှာဖြစ်တော့ လည်ပင်းကျီးပေါင်းခေါ်ပြီး ခါးဆစ်ရိုးတွေမှာဖြစ်ရင်တော့ ခါးကျီးပေါင်းလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
အရိုးအဆစ်တွေကို ဘယ်ညာ အထက်အောက် ချောချောမွေ့ မွေ့ လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုတဲ့ ကြားခံ disc ကလေးတွေ ပျက်စီးလာပြီဆိုရင် လည်ပင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တောင့်တင်းနာကျင်လာမှာကတော့ အသေအချာပဲပေါ့။
ခေါင်းကိုက်တာ ဇက်ကြောတက်တာတွေဖြစ်မယ်။ ဟိုဘက်ဒီဘက် လှည့်မရလို့ “ဟာ..အဲ့လိုနော်..ချေတယ်နော် မခေါ်ဘူးနော် ဒီဘက်တောင် လှည့်မကြည့်ဘူးနော်” စွပ်စွဲခံရတတ်တယ်။
ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင်တော့ အရိုးအတက်ကလေးတွေက ကျောရိုးတဝိုက်က အာရုံကြောလေးတွေကို သွားဖိမိ ထိမိရင် ခြေလက် ထုံကျင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကျောရိုးတလျှောက်မှာ ဦးဏှောက်ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ spinal cord အာရုံကြောမကြီးကို ဖိမိရင်တော့ လမ်းလျှောက်ရခက်လာတာ ချိနဲ့လာတာ ဆီးဝမ်း မထိန်းနိုင်တာတွေအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်တော့ ဆရာဝန် မြန်မြန်ပြဖို့ လိုပါတယ်။
လည်ပင်းကျီးပေါင်းလို့ သေချာဖို့ လည်ပင်းရိုးကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်လာရင် လူတစ်ရာမှာ ရှစ်ဆယ့်ငါးယောက်လောက်မှာ လည်ပင်းကျီးပေါင်းလို့ ပြောလို့ရတဲ့ Osteoarthritis(OA) Changes တွေ ဓာတ်မှန်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဖြစ်လာတဲ့ ဝေဒနာတွေဟာ လည်ပင်းကျီးပေါင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ တခြားရောဂါတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နေနိုင်တာ သတိထားရပါမယ်။
လည်ပင်းကျီးပေါင်းကြောင့် မူးနိုင်ချေနည်းပါတယ်။ နားအတွင်းပြဿနာတစ်ခုကြောင့် ခေါင်းလှည့်တိုင်းမူးတဲ့ Benign Positional Vertigo ရောဂါဟာ လူကြီးတွေမှာ အဖြစ်များပြီး လည်ပင်းကျီးပေါင်းလို့ မကြာခဏ မှားသမုတ်တတ်ကြပါတယ်။
Spinal cord အာရုံကြောမကြီးနဲ့ spinal nerves အာရုံကြောလေးတွေ၊ spinal cord သွားရာလမ်းတစ်လျှောက် အခြေအနေတွေကိုသိနိုင်ဖို့ သံလိုက်ဓာတ်မှန် MRI နဲ့ CT scan တွေ ဆက်လုပ်ရတတ်ပါတယ်။
အာရုံကြောမကြီးကို ထိခိုက်တဲ့ (ဒါမှမဟုတ်) ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတော့ ခွဲစိတ်ရတတ်ပါတယ်။
အဲ့လောက်မဆိုးတဲ့ ဇက်ကြောတက်တာ တောင့်တင်း နာကျင် ကိုက်ခဲတာ ထုံတာကျင်တာတွေအတွက်ကတော့ လိမ်းဆေး၊သောက်ဆေးတွေ၊ Physiothreapy လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သက်သာအောင် လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
သုတေသနမရှိတဲ့ အမည်ခံသက်သက် ကျီးပေါင်းပျောက်ဆေးဆိုတာတွေ ဆေးမြီးတိုတွေတော့ ရှောင်ရပါမယ်။
ဘယ်တော့မှ ပျောက်မသွားဘဲ ကျောရိုးတလျှောက်အဆစ်တွေမှာ အမြဲဆက်ရှိနေမဲ့ OA Changes တွေနဲ့ ‘ကျီးပေါင်း’ ဆိုတဲ့ကောင်တွေကတော့ “ဇရာ” ဆိုတဲ့ နောက်ထပ် ခပ်ဆိုးဆိုး ကြီးပေါင်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အတူတူ ကိုယ့်ရဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် လည်ပင်းကိုဖက်လိုက် ခါးကိုဖက်လိုက်နဲ့ တတွဲတွဲ လိုက်လာနေဦးမှာကိုး။